सबै कुरा तपाईलाई पानीको eutrophication को बारे मा जान्नु पर्छ हरियो नवीकरणीय
के तपाईंलाई पानीको eutrophication थाहा छ? पानी प्रदूषण सम्बन्धित धेरै वातावरणीय समस्याहरू छन्। हामी परिभाषित गर्दछौं पानी प्रदूषण कोमो बाह्य एजेन्टहरू, चाहे प्राकृतिक वा कृत्रिमको कारण पानी र यसको संरचनाको प्राकृतिक सुविधाहरूको नोक्सान। त्यहाँ धेरै प्रकारका प्रदूषकहरू छन् जुन पानीको आन्तरिक विशेषताहरूलाई परिमार्जन गर्न, परिवर्तन गर्न र घटाउन सक्षम छन्। पानी प्रदूषणको परिणाम स्वरूप, यसले ईकोसिस्टममा यसको कार्यक्षमता गुमाउँछ र विषाक्त हुनुको साथै मानवहरूको लागि पिउन योग्य हुँदैन।
आजका पानी प्रदूषणका प्रकारहरू मध्ये हामीबारे कुरा गर्ने छौं eutrophication। पानीको युट्रोफिकेशन एक्वाटिक इकोसिस्टममा प्राकृतिक प्रक्रिया हो, पोषक तत्वहरूको संवर्धन द्वारा गठित अधिक जैविक पदार्थ मानव गतिविधिहरु द्वारा नदीहरु र तालहरु मा निर्वहन। पानीको eutrophication मानिस र प्राकृतिक इकोसिस्टमको लागि के समस्याहरू छ?
1 पानीको गुणस्तर परिभाषा
2 पानीको Eutrophication
3 पानीको eutrophication को परिणामहरू
4 पानीको eutrophication को चरणहरू
4.1 ओलिगोट्रोफिक स्टेज
4.2 पौष्टिक आपूर्ति
4.3 युट्रोफिक चरण
5 पानीको eutrophication को कारणहरू
5.2 गाईवस्तु पालन गर्दै
5.3 शहरी फोहोर
5.4 औद्योगिक गतिविधि
5.5 वायुमंडलीय प्रदूषण
5.6 वन गतिविधि
पानीको गुणस्तर परिभाषा
पानीको eutrophication बारे कुरा गर्न सुरु गर्न (जस्तो कि हामीले माथि उल्लेख गरिसक्यौं, यो एक प्रकारको जल प्रदूषण हो) हामीले परिभाषित गर्नुपर्दछ, वर्तमान कानून अनुसार पानीको अवस्था कस्तो छ।
हामी पानीको गुणस्तरलाई यस पानीले प्रस्तुत गर्ने भौतिक, रासायनिक र जैविक प्यारामिटरहरूको सेटको रूपमा परिभाषित गर्दछौं यसले जीवित जीवहरूको जीवनलाई अनुमति दिन्छ। यसको लागि यससँग धेरै सुविधाहरू हुनुपर्दछ:
पदार्थहरू र सूक्ष्मजीवहरू मुक्त हुनुहोस् जुन उपभोक्ताहरूका लागि खतरनाक हो।
पदार्थबाट मुक्त हुनुहोस् जुन यसलाई उपभोगको लागि अप्रिय सुविधाहरू प्रदान गर्दछ (रंग, टर्बिडिटी, गन्ध, स्वाद)।
पानी कहाँ छ भनेर जान्नको लागि हामीले प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेपछि प्राप्त प्यारामिटरहरू केही पानी गुणस्तरसँग तुलना गर्नुपर्छ। यी मापदण्डहरू यूरोपियन संसद र काउन्सिलको निर्देशक २०००/2000० / / EC द्वारा लागू गरिएको छ, जसले पानी नीतिको क्षेत्रमा कार्य गर्नको लागि सामुदायिक रूपरेखा स्थापना गर्दछ, जसलाई अझ राम्रोसँग चिनिन्छ। पानी फ्रेमवर्क निर्देशन। यस निर्देशनको उद्देश्य पानीको राम्रो पारिस्थितिक र रासायनिक स्थिति प्राप्त गर्न र यसलाई कायम राख्नु हो।
पछिल्ला २०० बर्षमा, मानिस eutrophication प्रक्रिया तेज गरीएको छ, पानीको गुणस्तर र यसमा बस्ने जैविक समुदायको संरचना दुबैलाई परिमार्जन गर्दै।
Eutrophication उत्पादन गर्दछ माइक्रोलगाई को एक विशाल वृद्धि त्यो पानी हरियो रyes। यस र colorको कारण सूर्यको किरणले पानीको तल्लो तहहरूमा प्रवेश गर्दैन, त्यसैले त्यस स्तरको शैवालले प्रकाश संश्लेषण लिन प्रकाश प्राप्त गर्दैन, जसले शैवालको मृत्यु निम्त्याउँछ। शैवालको मृत्युले जैविक पदार्थको एक अतिरिक्त योगदान उत्पन्न गर्दछ ताकि ठाउँ सडेको र कम गर्ने वातावरण (यसको अर्थ अक्सिजन कम वातावरण) हो।
पानीको eutrophication को परिणामहरू
जब युट्रोफिकेशन हुन्छ, पानीले यो सम्भावित उपयोगहरू पर्याप्त मात्रामा हराउँछ जुन यो निर्धारित गरिएको छ र यसले पशु प्रजातिहरूको मृत्युदर, पानीको विघटन र सूक्ष्मजीव (अधिकतर ब्याक्टेरियाहरू) को बृद्धि गर्दछ।
थप रूपमा, धेरै अवसरहरूमा, सूक्ष्मजीवहरू मानव स्वास्थ्यको लागि जोखिममा परिणत हुन्छन्, जसरी पानीले सार्ने रोगजनकहरू हुन्छन्।
युट्रोफिकेशनले एक्वाटिक इकोसिस्टमको वातावरणीय विशेषताहरूलाई बदल्छ खाना श्रृंखला परिवर्तन र ईकोसिस्टम को एन्ट्रोपी (डिसअर्डर) बढाउने। यसका परिणामहरू इकोसिस्टममा जैविक विविधता गुमाउने, एक पारिस्थितिक असंतुलन हुने भएको छ, किनभने कम प्रजातिहरू एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्, धन र आनुवंशिक परिवर्तनशीलता घट्छ।
एक पटक कुनै क्षेत्रले आफ्नो सम्भावित वा स्वदेशी जैव विविधता गुमायो भने, प्रजातिहरू जुन अधिक अवसरवादी प्रबल हुन्छन्, अन्य प्रजातिहरू द्वारा निर्मित पहिलेका स्थानहरू ओगट्छन्। पानी eutrophication को पारिस्थितिक परिणाम संगै छन् आर्थिक परिणामहरू। खानेपानीको क्षति र नदी र तालको राम्रो अवस्थाले आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ।
पानीको eutrophication को चरणहरू
पानीको eutrophication तुरून्त हुँदैन, तर केहि चरणहरू छन् जुन हामी तल हेर्नेछौं:
यो सामान्यतया इकोसिस्टमको सामान्य र स्वस्थ अवस्था हो। एउटा नदी पारिस्थितिक प्रणाली, उदाहरणका लागि, यसमा बस्ने पशु र बोटबिरुवाहरूका प्रजातिहरू राख्न पर्याप्त पोषक तत्वको औसत उपस्थिति छ र पर्याप्त विकिरण दरको साथ शैतानले यसलाई भित्र संश्लेषण गर्न सक्छ।
एक ओलिगोट्रोफिक चरणमा पानीमा पर्याप्त पारदर्शिता हुन्छ र त्यसमा त्यहाँ जनावरहरू छन् जसले सास फेर्छ र अक्सिजन फिल्टर गर्दछ।
पौष्टिक तत्त्वहरूको असामान्य आपूर्ति छिटपुट, दुर्घटना हुन सक्छ वा समयको रूपमा निरन्तर केही चीज हुन सक्छ। यदि समय-समयमा त्यहाँ पानी पस्ने छ जसले नदीहरूमा पोषक तत्त्वहरूको अत्यधिक कारण गर्दछ भने, इकोसिस्टम पुन: प्राप्ति गर्न सक्दछ। जे होस्, यदि पोषक तत्वहरूको अतिरिक्त आपूर्ति निरन्तर हुन थाल्छ भने, बोटबिरुवा र शैवालहरूको विस्फोटक वृद्धि सुरु हुनेछ।
त्यहाँ एकल सेलुलर शैवालहरू छन् जुन पानीमा बढ्छ, उहीको फोटिक जोनमा। जसरी तिनीहरू प्रकाशसंश्लेषित शैवाल हुन्, तिनीहरूले पानीलाई हरियो रंग दिन्छ जुन प्रकाशमा अघि बढेको गहिराईमा रोकिन्छ। यसले ती बोटहरूका लागि समस्या सिर्जना गर्दछ जुन फोटिक जोनको मुनि अवस्थित छन्, पर्याप्त सूर्यको किरण प्राप्त नभएसम्म, तिनीहरू प्रकाश संश्लेषण र मर्न सक्दैन।
थप रूपमा, पोषक तत्वहरूको अधिकताका कारण, बोटबिरुवा र शैवालहरूको जनसंख्या घाता .्कीय वृद्धि हुँदै जान्छ र सबै प्राकृतिक इकोसिस्टमहरूमा जस्तै, पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रिएको छ। अब अवस्था यस्तो देखिन्छ: धेरै जनसंख्याको लागि धेरै पोषकहरू। यद्यपि यो अवस्था लामो समयसम्म जारी रहन सक्दैन किनकि मुख्यतया जनसंख्या पौष्टिक तत्वहरू खत्तम पार्छ र मर्छ र नदी वा तालको फेदमा फर्कन्छ।
तल मरेको जैविक पदार्थ ब्याक्टेरियाहरूले विघटन गर्दछ जुन अक्सिजन खपत गर्दछ र विषाक्त पदार्थहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छ जुन बोटबिरुवा र जनावरहरूलाई घातक हुन्छ।
अक्सिजनको अभावले तल मल्स्कलाई मर्दछ र माछा र क्रस्टेसियनहरू मर्छन् वा अप्रभावित क्षेत्रहरूमा जान्छन्। अक्सिजन अभावमा अभ्यस्त आक्रमक प्रजातिहरू देखा पर्न सक्छन् (उदाहरणका लागि, बार्बेलहरू र पर्चले सामन र ट्राउटलाई विस्थापन गर्न सक्छन्)।
यदि eutrophication धेरै उच्चारण गरीन्छ, एक अक्सिजन-मुक्त क्षेत्र नदी वा तालको तल सिर्जना गर्न सकिन्छ जसमा पानी धेरै घन, गाढा र चिसो छ र शैवाल वा जनावरहरूको विकासलाई अनुमति दिदैन।
पानीको eutrophication को कारणहरू
पानीको Eutrophication विभिन्न तरिकामा हुन सक्छ, दुबै प्राकृतिक र मानव। लगभग विश्वव्यापी पानीको eutrophication को सबै मामलाहरु मानव गतिविधिहरु को कारणले हो। यी मुख्य कारणहरू हुन्:
कृषिमा ती प्रयोग गरिन्छ नाइट्रोजन मल बालीनाली उर्वर गर्न। यी मलहरू पृथ्वीमा डुब्छन् र नदी र भूजलमा पुग्छन्, पानीलाई पोषकहरूको थप आपूर्तिको कारण र युट्रोफिकेशन ट्रिगर गर्दछ।
कृषिले उत्पन्न गर्ने eutrophication को प्रकार बिल्कुल फैलिएको छ, किनकि यसको एकाग्रता धेरै क्षेत्रमा फैलिएको छ र सबै एक समान छैन।
गाईवस्तु पालन गर्दै
जनावरको खण्डमा पौष्टिक तत्वहरू हुन्छन्, विशेष गरी नाइट्रोजन (अमोनिया) जुन बोटहरूले बढ्न प्रयोग गर्दछ। यदि पशुपालन जनावरको मलमूत्र राम्रोसँग व्यवस्थापन गरिएको छैन भने, तिनीहरूले नजिकको पानी दूषित गर्न सक्छन्।
सामान्यतया पशुधन क्षेत्र नजिकै पानी स्राव वा दूषित समयमै देखा पर्छ र यसले पानीलाई पूर्ण रूपमा इट्रोफाइज गर्दैन।
सहरी फोहोर जुन प्राय पानीको eutrophication निम्त्याउन सक्छ फास्फेट डिटर्जन्टहरू। फास्फोरस बिरुवाहरूका लागि अर्को आवश्यक पोषक तत्व हो, त्यसैले यदि हामी पानीमा फास्फोरसको ठूलो मात्रा थप्छौं भने, बोटहरू अत्यधिक रूपमा बढ्ने र eutrophication निम्त्याउँछन्।
औद्योगिक गतिविधि पनि पोषक तत्वहरु को स्रोत हुन सक्छ eutrophication को विशिष्ट स्रोत उत्पादन। उद्योगको मामलामा दुबै नाइट्रोजनस र फस्फेट उत्पादनहरू डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ, अन्य धेरै विषहरू मध्ये।
शहरी फोहोरले गर्दा उत्पन्न eutrophication जस्तै यो प्रकोष्ठ पाबन्द छ, जब यो हुन्छ जब ठूलो तीव्रता संग विशिष्ट क्षेत्रहरु लाई प्रभावित गर्छ।
सबै ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनहरू पानीमा ईट्रोफिकेशन गराउन सक्षम छैनन्। यद्यपि नाइट्रोजन अक्साइड र सल्फरको उत्सर्जनले वातावरणमा प्रतिक्रिया दिन्छ र एसिड वर्षा गर्छ।
नाइट्रोजनको %०% समुद्रमा पुग्ने वायुमण्डलीय मार्गबाट ​​हुन्छ।
यदि वनका बाँकी अवशेषहरू पानीमा छोडिन्छन्, जब ती घट्छन् भने यसले नाइट्रोजन र बोटबिरुवामा रहेको पोषक तत्वहरूको बाँकी अंश दिन्छ। फेरि यो पोषक तत्वहरूको एक अतिरिक्त आपूर्ति हो जुन eutrophication फार्म गर्दछ।
पानीको युट्रोफिकेशन विश्वव्यापी समस्या हो जसले ताजा पानीको सबै स्रोतहरूलाई असर गर्दछ। यो एक समस्या हो जुन चाँडो नै हल गर्नुपर्दछ, किनभने जलवायु परिवर्तनसँगसँगै खडेरी बढ्ने छ र हामीले यस ग्रहमा उपलब्ध सबै ताजा पानीका स्रोतहरूको रक्षा गर्नुपर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: हरियो नवीकरणीय » वातावरण » Eutrophication
क्यानरी टापुहरूमा पछिल्लो २ बर्षमा नवीकरणीय उर्जा २०% ले बढ्छ